Warqaad badanaa ma BBC Somali ayuu dhageystaa? – We Somalia
Warqaad badanaa ma BBC Somali ayuu dhageystaa?
Sababta ay dadku iigu yeeraan warqaad badane: Marka aad akhriso sheekadani adigaaba la yaabi doono misnaa is weydiinn doono:
Muxuu ku jeclaaday kala gudbinta wararka?
Ma warqaad news buu la shaqeysay?
Mise BBC Somali?
Taa waxaa kaaga daran ma aanan ahayn qof warqaad badan oo wararka kala gudbiyo mana ahayn qof shaqsiyan goobjooge ah oo wararka soo gudbiyo marka laga reebo dadka aniga ila shaqeeeyo ee iyadana jecel war gudbinta.
Warqaad badanaa Sida BBC Somali
Yaa igu caawiyo in aan noqdo warqaad oo aan dadka isku diro?
Warqaad badanaa oo wararka kala gudbi ogaa
Qiso ka dhacday degmada Dayniile ee caasimada Soomaaliya
Magaceygu waa Faarax, waxa ay dadku iigu yeeraan (Faarax Warqaad). Hadda waxaan rabaa in aan kula wadaago sababta aan ku jeclaaday in aan wararka kala gudbiyo iyo waxyaabaha igu kalifay.
Qof walbo aduunkani ku nool Alle wax buu ku saliday wax uun, ha adaan waxay doonaan balse anigu in aan wararka kala gudbiyo ma jiraan wax aan ka jecelahay. Ma ihi qof xun mana umaleeyo in aan ahay, balse cilad ayaa jirto, wax kale ma ahan ee waxaan ahay qof warqaad badan. Waxaan xiiseysaa kala gudbinta wararka, mana jecli in aan lamaanaha kulan siiyo sida website ka Fariimo ee ay lamaanaha guurdoonka ah ku kulmaan. Ilaah amarkii dadka waxa ay igu xantaan in aan dadka ka daba shaqeeyo, taasina anigu waxba uma arko, maxaa yeelay balwadeyda ayaa ah in aan dadka is jecel ka daba shaqeeyo, misana igu yaraahdaan Alla warqaad badanaa ninka?
Qoreyaasha qaar marka ay ka shaqeynayaan qoristada warqadaha jaceylka ee lamaanaha isu soo dhaweeyo, anigu kuwaas waan ka duwanahay. Waxaan jecelahay uun in wararka kala baandheeyo sida warqaad news iyo fariimo.com oo kale.
Qish: Erayo romantic ah oo soo jiidasho leh
Hadii aan isku dirana waxa aan aad ugu farxaa sida qiyaamadeeyda ay u shaqeeysay, beentana aad ayaan u jeclahay maxaa yeeley waxaan ku sameeystaa sheekooyin been abuur ah oo aan dadka iskaga hor geeyo.
Saxiibadeey oo kala ah Mashiidiyo iyo Suqurji iyo Xaasid oo labada ku nool caasimada Somalia ee Muqdisho. Asxaabteeyda haweenkana ee wararka maanta ii soo gudbiyo waxa ay kala yihiin, soo dhaga dhageeyso , iyo i soo tabiso, af hayeenkeena waa firdhiye oo seeyro magaalooyinka dacaladooda.
Mararka qaar asxaabteeyda aan wada shaqeysano ayaan isku dhacnaa oo aan been ka abuurtaa sidaas darteed ayeey magacaan iigu bixiyeen oo ah Cali Aqal Gube “warqaad badane”. Ma fahansanid weli, sababta aan warqaad u ahay, oo aan wararka u kala qaado, Ma ihi sida website yada, BBC Somali, warqaad News iyo Caasimada com dh ee waxaan ahay uun qof warka iska jecel. Ma sheegi karo sababta, adiguna ha ii soo qorin comment marka aad dhameysato qormadani. Maxaa yeelay waa uun balwadeyda.
Waa maxay sababta ay dadku iigu yeeraan warqaad badanaa? Maxaanse ku doorbiday in aan wararka maanta kala gudbiyo sida website yada Caasimada, Dayniile iyo Warqaad news.
Hadaba aan kuu sheego sababta la iigu yeero warqaad badane!
Hadda waxaa laga yaabaa in aad is tiraahdo ninkaan warqaad badanaa, muxuu isku amaani waayey oo sidaan iskaga hadlayaa? Miyuu waalan yahay mise wuu daroogeeysanyahay? Maya maya. Labadaba ma ihi taam ayaan ahay ee waa balwadeyda in aan warqaad noqdo, oo aan wararka kala firdhiyo, sida dadka qaar aay u xiiseeyaan isboortiga, aflaanta, ciyaaraha, kaftanka iyo news ka. Aniga waxaan ka helaaa sidaan iyo si la mid ah waxaan leeyahay Warqaad news ah oo ii gaar ah oo aan uga waramo dadka aan kala geeyey iyo sida fog aan isku nacsiiyey.
Haddii aan mid ka mid ah idiin sheego Firdhiye oo aan been ka abuurey asagoo iigu booteeyey haddii aan imaado Degmada Dayniile, buuq badane in uu goobada ii toosin doono, balse aniga goobo ma lihi nin toosan ayaan ahay ee asaga ayaa sidaas igu yiri.
Waxaan kaloon, been ka abuurtey ii so tabiso. waxaan qoorta isku galieyey ii soo Tabiso iyo Firdhiye, hadda Firdhiye ayaa kalarka looga dhagay asagoo iska tuug tuugay, anigoo warqaad ahna waxaan diyaar u ahay in aan mar kale warka idinla socodsiiyo.
Qish daawo sawirada: Xeebaha ugu quruxda badan dalkeena Somalia
Sida ay Tabiso wax u qarbuday, ayaan warqaad wararka maanta idin kula wadaagi doono.
La soco qeybta kale oo noqon doonto mid aad u xiiso badan. Kor waxaan ku xusay in aan ahay warqaad badane, ha ila yaabin waa caadadeyda, sida aad warka u jeceshahay ayaan anna wararka u kala gudbiyaa, goob walbaana waxaan u diraa goobjooge si uu wararkaasi iila socodsiiyo.
Weli war baan soo wadaa ee la soco warqaad badane.
Qiso jaceyl taasoo ah mid murugo badan ayaa waxay ka dhacday caasimada Soomaaliye ee Muqdisho gaar ahaan degmada Dayniile. Qisadaasi waxay u dhacday sidaan:
Guurkeygu ma ahayn guurka aan ku riyoonayay, isaguna daruuri uma ahayn inuu sameeyo wax qalad ah, dambina kuma lahayn ee waxaa qorneyd uun in aan qisadani kula wadaago. Waxaan la noolaanin fursadiisa lumiyay. Hadda, anigu ma ihi „naagtii hore ” haddii xittaa ay jiraan wax caynkaas ah.
Waan jeclahay naftayda. Waxaana ku kalsoonahay nafteyda. Xaqiiqdii waxaa jira waxyaabo badan oo aan doonayo inaan nolosheyda ku sii hormariyo. Si kastaba ha noqotee hadda dhib kuma qabo da’dayda, ama caqligayga, ama sida jidhkaygu uu e egyahay, ama shakhsiyaddayda – waxyaabahaas oo u muuqda inay si khaldan u dhibaateeyaan haweenka oo keliya.
Aniga ha i wareerin hana idhibin sabab kasta ha noqotee. Waxaan leeyahay xirfad aan ku helo wax kabadan lacag igu filan kaligey si aan ugu noolaado nolol raaxo leh.
Waan aqaanaa sida loo isticmaalo qalabka korontada, guriga loogu xiro nalalka, loo hagaajiyo baabuurta, Google-kana wax kasta looga raadiyo. Waxaan u leeyahay taa oo aan ula jeedaa in haweenka kale aniga igu tusaale qaataan.
Ma jiro qof gardaro macno-darro ah aqbalayo. Waan ogahay inaan madax adagahay sida baqasha oo kale laakin guurku waa mid aan dhamaad lahayn. Sidaas oo ay tahay inkastoo oo aan ahaa qofkii ugu horreeyay ee nolosha guriga ku filan, soona shaqeysto, hagajisto, waxyaalaha ugu badan ee guriga yaalo, kuna korsado carruurtayda inta badan kaligay.
13 sano ayeey igu qaatay guurkaas aan qiimaha lahayn. Ugu dambeys, ninkayga wuxuu dareemay inaanan asiga u baahnayn. Maxaa yeelay waxaan ahay qof karti badan iskuna kalsoon. Laakiin in uu sidaa ku fikiro wuu ku qaldanaa. Waxaan u baahday taageero. Waxaan u baahday lamaane, saaxiib. Xittaa qof arki lahaa sida adag ee aan u shaqeynayo si aan madaxayga kor uga ilaaliyo biyaha.
Ma aha in la xuso qulqulatada shucuurta ee bil kasta iyada oo aan lagu guuldaraysanin inaad aragto hal khad casaan ah oo ku yaal usha nacaladda. Dareenka aad ku dhex socoto xirmooyin badan oo baaritaanno uur leh, ama sawiro ka qaadashada dhalashada ilmahaaga. Aad ayaan ugu furnaa halgankayga, maxaa yeelay waxaan u maleynayaa inay dadka kale caawisay si uun.
Ninkaygu kamuu warqabin tani waxay ahayd wax aan taageero ugu baahnaa. Wax fikrad ah kama qabin, sababtoo ah uma aanan sheegin ama si toos ah uma aanan weyddiin. Wuu iska weynaaday intaas. wuxuu ahaa shan jir xannibmay isagoo qaan-gaadh ah- oo aan lahayn awood uu taageero ku siiyo habkaas.
Ninkayga wuxuu teleefonkiisa ku ciyaari jiray game, inta badanna wuu iska indho tirayay. Waqtigiisa inta badan wuxuu ku qaatay ciyaartaas iyo mar uu banaanka ku soo fadhi diriro. Aniga waqti maba uusan isiin jirin marka laga reebo in uu habeenkii dhinaceyga jiifto subaxdiina uu ka soo kaco kadibna halkaa uu ka sii bilaabo. Weliba anigoo rabo in uu laabta igaliyo kadibna ibaashaaliyo. Si kastaba ha noqotee sidaas ma aysan dhicin.
Wax badan ayeey igu qaadatay inaan u dulqaato balse ugu dambeys waxaan weydiistay inuu iska key furo oo aan kala tagno. Maxaa yeelay kama helayo waxa aaan rabo.
Hubaal, waxaan habeen walbaa ku gurguurtaa sariirta kaligeey, anigoo dareemayo inaan diyaar u ahay ciyaarta adag ee sariirta. jirkeyguna uu u baahanyahay taabasho diiran. Waxaan si gaar ah u xasuusanayaa baahalkiisa buuran ee macaanka ahaa oo aan inta badan dareemi jirin wax aanan caadi ahayn.
Si kastaba hadda Carruurtu way riyoonayaan oo marba dhinac isu gadinayaan laakiin almuhiim anigu waxaan ahay xur waxaana ahay qof nolosheeda ku faraxsan.